Indlu+unxweme kwi-400 m - I-Airbnb
Indlu+unxweme kwi-400 m
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguMarina Raymonde
Unxweme lwendlu enentlabathi entle ekwi-400 m. EMzantsi weAlicante, le ndlu ilungele intsapho ikulindile kule ngingqi ininzi eneendawo ezininzi zonxweme kunye nezinye iindawo ezinika umdla kunye neendawo ezintle.
Yenziwe yalula kodwa yaxhotyiswa ngokupheleleyo, yahambelana nobomi elunxwemeni, le ndlu ekwi-complex inikezela ngendawo eyaneleyo yezibini ezibini kunye nabantwana abayi-2 ukuya kwabayi-3 okanye intsapho enamalungu ayi-6 xa kuphuma abantu ababini abaza kutyelela elunxwemeni. Kukho iiTV eziyi-2 ezinamajelo esatellite asimahla kumazwe ngamazwe kwigumbi lokuhlala nakwigumbi lokulala 2. Abazali nabantwana banokubukela iinkqubo ezahlukeneyo.
Ehlotyeni, iveranda yangaphambili inesikhephe kunye nendawo yokutyela ilanga.
Ngasemva kwendlu kukho igumbi lokuhlamba impahla elahlukileyo elinomatshini wokuhlamba impahla. Kwakhona umatshini wokuhlamba izitya phambi kwekhitshi, ishawa ephandle, igumbi langasese lesithathu elinesinki kwaye kwindawo enkulu yizixhobo zaselwandle, izitulo, iambrela, oomatrasi abampontshwayo, izinto zokuqubha, imidlalo eyahlukahlukeneyo, zivumelekile ukuba zisetyenziswe ngesicelo sokuyiphatha kakuhle.
Imidlalo kunye neencwadi ezahlukeneyo ngeelwimi ezahlukeneyo zeentsana nezindala ziyafumaneka.
"Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga" ikwisithili esihlala abantu.
Kufuphi namayeza, kwiikhilomitha eziyi-4 ikliniki/kwizibhedlele eziyi-30 km.
Isuphamakethe encinci ekumgama we-400 m, iikhefi, ivenkile yokutyela entle kakhulu enomvuzo (ikwazisa nakwindlu yePaellas nezinye izinto ezimuncis 'iintupha)
Kwilali, ca. 4 km: ngoMgqibelo/ngeCawa Mercado (imarike), imarike yobugcisa. ngokuhlwa.
Ii-carousels, iikhefi ezingakumbi, iivenkile zokutyela, yonke into iyafikeleleka.
Unxweme lwendlu lukwiimitha ezimalunga ne-400 (malunga nemizuzu eyi-5 uhamba ngeenyawo), luyilungele intsapho, kwaye lufanelekile ngokukhethekileyo kubantwana abancinci.
Kukho izinto ezahlukahlukeneyo ezenziwayo kwingingqi eyingqongileyo: isikhephe esinokuhamba ngeenyawo, izifundo ze-surfing, ii-paragliders, ukudayiva, ukukhenketha ngesikhephe kuquka i-snorkeling kunye nee-dolphins, iilwandle ezintle zendalo, iintaba (i-Sierra de la Espuna).
lwezinja olukufutshane kumgama weekhilomitha eziyi-4 kunye nolwandle olude, oluhle kakhulu, iivenkile ezingaduriyo, iikhefi, kunye neevenkile zokutyela kuyo yonke indawo. Inqaba enesibane phezulu. Ngokuhlwa, imeko yezibuko intle kakhulu.
Kumgama weekhilomitha ezimalunga ne-40 yipaki enkulu yohambo, iTerra Natura, kunye nevenkile yokutyela ecaleni kwechibi elikhulu lokuqubha. Ukuqubha nge-otters kunokwenzeka (uhambo losuku).
Isixeko esikhulu sezibuko saseCartagena sikude ngeekhilomitha eziyi-35, izibuko lemfazwe elinembali egcweleyo. Ukufikelela kwiindlela eziphakamileyo okanye nge-Sierra eyomileyo (iindawo ezikhethekileyo).
Umbuki zindwendwe ngu- Marina Raymonde
Wir sind eine internationale Familie mit spanischen, französischen und deutschen Wurzeln.
Ndifumaneka ngokobuqu ngefowuni, ngomyalezo, ngeWhataspp, nge-telegram kunye ne-imeyile. Isihlobo sasekuhlaleni siphatha izitshixo size siphendule imibuzo yakho ibe siyakuvuyela ukunceda ukuba unengxaki, naye uyafumaneka. Kukwakho nokudibana kakuhle nabamelwane abakufutshane kwimeko yongxamiseko kunye nabanye abantu.
Ndifumaneka ngokobuqu ngefowuni, ngomyalezo, ngeWhataspp, nge-telegram kunye ne-imeyile. Isihlobo sasekuhlaleni siphatha izitshixo size siphendule imibuzo yakho ibe siyakuvuyela uk…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Puerto de Mazarrón